Izindaba - Ukusetshenziswa Kwentsha Ukubhema Kanye Nenqubekelaphambili Yokusebenzisa Ugwayi we-E
Ukusetshenziswa kwezinhlelo zokulethwa kwe-nicotine zikagesi ngababhemayo abasebasha akuhlangene nokwanda noma ukuncipha kogwayi.
Ukusetshenziswa okwandile kwe nicotine electronic amasistimu okulethwa (ENDS, okuhlanganisa ama-e-cigarette) kubantu abasha (YAs) abaneminyaka engu-18 kuya kwengu-24 e-United States aphakamisa imibuzo mayelana nokuthi le mikhiqizo izobathinta kanjani abasebenzisi bakagwayi ne-nicotine esikhathini esizayo.
I-National Academy of Sciences, Engineering, and Medicine (NASEM) isanda kushicilela ukubuyekezwa kwezincwadi ngomthelela we-ENDS empilweni yomphakathi. Isiphetho siwukuthi ukulimala kokusetshenziswa ekugcineni kwababhemayo abadala kungase kuncishiswe kodwa uma abantu abaningi abangabhemi ikakhulukazi abantu abasha beyengeka ukuba baqale ukubhema, le ndlela ingase ibangele ukulimala. Ngaphezu kwalokho, abalobi bombiko we-NASEM bathola ukuthi kukhona "ubufakazi obulinganiselwe" bokusekela inkolelo-mbono yokuthi "ukusetshenziswa kwe-e-cigarettes kwandisa imvamisa nokuqina kokubhema esikhathini esizayo".
Ngaphezu kwalokho, phakathi kuka-Agasti 2018 no-Okthoba 2019, isamba sama-YA angu-1,096 (iminyaka engu-18-24 ubudala) afakwe ekuhlaziyweni kocwaningo oluqhubekayo lweqembu lesikhathi eside labantu abadala nentsha.
Kusampula yama-YA angu-1096, ama-609 (55.6%) kwakungabesifazane abasebasha, abangama-698 (63.7%) babemhlophe, kanti abangama-276 (25.2%) bekungamaSpanishi. Isilinganiso (SD) yiminyaka engama-21.4 (1.9), kanti abangama-584 (53.3%) baqede okungenani izifundo zasenyuvesi. Phakathi kwabo, abangu-214 (19.5%) bekungabasebenzisi bensangu ezinsukwini ezingu-30 zokuqala, kanti abangu-161 (14.75%) babebhema nsuku zonke ezinsukwini ezingu-30 zokuqala. Kugagasi lokuqala, isilinganiso sokuvama kokubhema namandla sikhuphuke phakathi nenyanga kuze kube sekupheleni kwegagasi lesibili. Ku-wave 3, isilinganiso soshintsho emazingeni okubhema sasisondele ku-zero kuwo wonke amaqembu (izinsuku ezingu-0.4-0.7). Kusukela kugagasi lesibili kuya kugagasi lesithathu, isilinganiso soshintsho kumfutho wokubhema sashintsha kakhulu, sisuka kugwayi ongu-5.0 (ekupheleni kwesikhathi sokuqala) saya kugwayi ongu-22.6 noma ngaphezulu (ekupheleni kwenyanga yokusetshenziswa kwezinsuku eziyi-6).
Ngaphezu kwalokho, Kudatha ye-PSM isethi inani lezinsuku zokubhema ezinsukwini zokuqala ezingu-30 lenyuke ngo-0.33 kuya ezinsukwini ezingu-1.64 kuye ngokuthi incazelo yokusetshenziswa kokuphela kwe-Wave 2. Phakathi kwe-wave 2 ne-wave 3, umfutho wokubhema nawo anda ngenyanga yokuqala. , ikakhulukazi kuma-YA asebenzise izinqamu zikagwayi izinsuku ezingu-6 noma ngaphezulu ezinsukwini ezingu-30 zokuqala. Nokho, lezi zilinganiso ziyahambisana nalezo zegagasi 2. Uma kuqhathaniswa nabantu abangakaze basebenzise izinqamu zikagwayi izinsuku ezingu-6 noma ngaphezulu ezinsukwini ezingu-30 ezidlule, inani labantu ababhemayo ezinsukwini ezingu-30 ezidlule landa ngo-44,4, kodwa lokhu kwanda bekungabalulekile ngokwezibalo.
Ngakho-ke, ukusetshenziswa kwezinhlelo zokulethwa kwe-nicotine nge-elekthronikhi kwababhemayo be-YA akuzange kuhlotshaniswe nokwanda noma ukuncipha kokubhema phakathi nenkathi yonyaka owodwa kusukela ngo-2014 kuya ku-2015. Kodwa-ke, ngokuthuthuka okusheshayo kwemakethe ye-e-cigarette, ukusetshenziswa kwe-e. -ugwayi ungase uhambe ngezindlela ezihlukene esikhathini esizayo.
I-Heechi Tech Limited ingeyomkhakha wezezimali China HNB Supplier esikhathalela impilo yakho nokuthokoza kwakho isikhathi eside.
Pearson JL, Sharma E, Rui N, et al. I-Association of Electronic Nicotine Delivery System Ukusebenzisa Ngokuthuthuka Kokubhema Ugwayi noma Ukunciphisa Phakathi Kwabantu Abadala Abancane. JAMA
Isikhathi sokuthumela: Nov-05-2021